Heyb Sooca Guryaha | LawHelp Minnesota
Heyb Sooca Guryaha
Waa maxay noocyada heybsooca ee sharci darada ah?
Minnesota, shaqaalaha guryaha kuulama dhaqmi karaan si ka duwan sida dadka kale taasoo ay ugu wacan tahay:
Xaaladda qoyska (in aad caruur ama uur leedahay)
In aad qaadato gargaarka dadweynaha(MFIP, GA, SSI, iwm.)
Halka aad asal ahaan ka soo jeedo
Da’da (St. Paul kaliya)
Caqiidada (aaminsan tahay)
Xaaladda guurka (soolane, xaas ah, la soo furay)
Waa maxay calaamadaha lagu garto heyb sooca dhici kara?
Diidmada in lagu siiyo codsiga
Marka aad telefoonka ku soo wacdo, guryo ijaar ah wey hayaan. Laakiin marka ay arkaan midabkaaga waxa ay yiraahdaan “waa la kireystay.”
Kireeyaha oo yiraahda “kama kireyneyno MFIP” ama “kama kireyneyno gargaarka degdegga ah”
Waa laguu diiday naafanimadaadu darteed, inkasta oo naafanimadaadu aysan kaa hor istaageyn in aad raacdo heshiiska kirada. Akhri xogta urursan ee U Fududeynta Suuro Galka Ah: Ma Dooneysaa In Kireystuhu Sameeyo Isbedel Waayo Waxa Aad Tahay Qof Naafo Ah.
Kiraayaha oo yiraaha “caruur lama ogola ”laakiin aysan aheyn guryaha dadka da’da ah u gaarka ah.
Maamulaha guryaha oo si kala duwan ula dhaqma dadka. Tusaale ahaan, iyaga oo u sheega dadka la siiyo MFIP in laga doonayo in dakhliga soo gala uu 3 jeer ka badan yahay kirada, laakiin sidaas uma sheegaan dadka aan la siin gargaarka dawladda.
Codsigaaga marna lagama shaqeeyo diintaada darteed.
Hab dhaqan kala duwan
Daryeelaha guriga oo dayactirka guryaha ku horeeya dadka caddaanka ah ka dibna dadka laatiinka ah.
Maamulaha oo dadka sharciyada si kala duwan ugu fuliya ama ijaar dheeraad ah ka qaada dadka midabka leh.
Kireeyuhu ma ogola inuu isbedel yar ku sameeyo sharciyada si dadka naafada ah si wanaagsan ugu noolaadaan guriga. Tusaale ahaan, u ogolaashaha xayawaanka guri joogta ee wehelka u ah. Akhri xogta urursan ee ku saabsan Ma Haysan karaa Xayawaan.
Xafiiska maamula guryaha oo aan kuu ogoleyn in aad guriga ku rakibto wadada uu guriga ku galo gaariga dadka naafada ah. Akhri xogta urursan ee U Fududeynta Suuro Galka Ah: Ma Dooneysaa In Kireystuhu Sameeyo Isbedel Waayo Waxa Aad Tahay Qof Naafo Ah.
Waxaa jira sharciyo gaar ah oo caruurta khuseeya,ama maamulaha ayaa ka kireeya dabaqa koowaad qoysaska caruur wadata.
Daryeelaha guriga ayaa kugu khasba in aad wada sheekeysataan oo iska soo gala gurigaaga markii uu doono. Akhri xogta urursan ee Khashkhashaada Galmada Mulkiilaha Gurigu uu Rabo.
Ilaalada dhismaha ayaa dadka ku soo booqanaya si kale ula dhaqmo maadaama ay yihiin Indiyaan Ameerikaan.
Xaafadaha deriska ayaa kugu cadaadiya in aad xaafadda ka guurto iyaga oo kuugu yeera magacyo xunxun.
Maxaan ka qaban karaa?
Haddii laguu diido in guri lagaa kireeyo oo aad tuhunsan tahay in tahay mid heyb sooc ku dhisan, soo wac lambarka hoos ku xusan sida ugudhaqsaha badan.
Waxa kale oo aad yeeli kartaa in saaxiibkaa uu la xiriiro kireeyaha oo aad aragto sida uu ula dhaqmo qofkaas. Tusaaale ahaan: haddii aad aaminsan tahay in heyb soocu yahay mid ku dhisan qowmiyad, fiiri haddii qof qowmiyad kale soo jeeda loola dhaqmo si ka wanaagsan sida laguula dhaqmay. Qor waxa dhaca mar kasta oo adiga iyo saaxiibkaa aad la hadashaan.
Haddii si xun laguula dhaqmay ama lagugu qashqashaado meesha aad degan tahay, mulkiilaha waraaq u qor. nuqul (koobi) ka reebo. Iyo cadeynta heybsooca lagugu sameeyey. Isku day in aad goobjoogayaal ka markhaati geliso oo aad heysato halka lagala xiriir karo. Qoraal ka samee mar kasta oo wax dhacaan. Haddii ay naftaadu khatar ku jirto, caawinaad weydiiso.
Dacwad Iyo Cabashada Hay’adda
Waxa aad furi kartaa dacwad aad ku joojiso heyb sooca oo mararka qaarkood aad ku heli kartaa magdhaw lacageed. Haddii aad dooneyso talaabo degdeg ah oo laga qaado guriga laguu diiday, lagu joojiyo qaashqashaadda, ama aad kaga hortagto in guriga lagaa saaro, dacwad aad maxkamadda ka furto ayaa ah xalka ugu wanaagsan. Haddii uu dakhligaagu yar yahay, la xiriir xafiiska Legal Rights.
Haddii uu dakhligaagu yar yahay, soo wac:
Mashruuca Heybsooca Guryaha (The Housing Discrimination Law Project) (612) 334-5970
Mashruuca U Sinaashaha Guryaha (Housing Equality Law Project ) (651) 222-4731
Waxa kale oo aad caawinaad weydiisan kartaa hay’adaha dawladda ee looga dacwoodo sharciyada heyb sooca guryaha Waxa ay baaritaanka sameeyaan iyaga oo aan wax lacag ah kaa qaadin. Haddii ay ogaadaan inuu heyb sooc jiro, waxa ay eegayaan haddii heshiis la gaari karo. Haddii aan la gaarin wax heshiis ah, waxaa suurogal ah in ay hay’addu dacwad furto oo liddi ku ah qofka heybsooca geystay. Hay’daha waa kuwo hoos ku xusan: